USho Mdjozi ukhiphe ingoma akhuthaza ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima
USHO Madjozi ukhiphe umucwi othi Spirits Up ngokubambisana neTikTok Isithombe:INSTAGRAM.
Jamal Grootboom | June 26, 2020
UMCULI wakuleli osakuqokwa okwesibili kumaBET, uSho Madjozi, uqhamuke nomqhudelwano womdanso omusha nomucwi osihloko sithi Spirits Up ngokubambisana nenkampani eyinkundla yokuxhumana iTikTok.
Uthe wenze le ngoma ngenhloso yokukhuthaza umphakathi kulesi sikhathi esinzima obhekene naso kulezi zinsuku.
Ekhuluma neqeqebana labemithombo yezindaba, lo mculi wodumo lwengoma ethi Huku, ukhulume ngezinto eziningi njengokuthi kungani esebenzisana neTikTok, kungani enze iSpirits Up futhi wadalula ukuthi yini ebimbambe ekukhipheni umculo omusha noma icwecwe elisha.
Ebuzwa ukuthi yini eheha abantu abasha kwiTikTok, uSho Madjozi, uthe ucabanga ukuthi yingoma ziyenzeka ngempela khona njengoba kwabelwana ngama-video.
"Kunenkundla yezinto ezibukwayo okuyinto ebingekho. Izinga lezobuciko elivunyelwe kwiTikTok liphezulu kakhulu. Ukuhlunga ngithole ukuthi kuhle futhi kulula. Ngicabanga ukuthi abantu bathanda kakhulu imibukiso. Ikakhulukazi ukuvela kwemifanekiso ehambisana nomculo, yenza kube nemidanso emihle."
Ekhuluma ngeSpirits Up nokuthi kungani esebenzisana neTikTok, lo mculi weWakanda Forever uthe "Bengifuna ukukhuthaza abantu ukuba babuke okuhle empilweni ukuze behlale bejabule kulesi sikhathi somsangano".
"Yingakho ngikhethe ukubambisana nabeTikTok emcimbini wokwethulwa kwayo. Ngesikhathi ngisekhaya , iTikTok iyonankundla ebingijabulisa futhi ingilethela ubumnandi. Ngaphezu kwakho konke, ibiyindlela ebengixhumana ngayo nabangani bami".
Uthe uyeza umculo omusha azowukhipha enkampanini asanda kusayina kuyo yize engayidalulanga. Uzoyicula bukhoma iSpirits Up kwiTikTok ngoJulayi 3 ngo7 ebusuku.